Shiinaha warshad sumadeed kala iibsiga kululaynta iyo soosaarayaasha | Fangda
* Fangda Summadaha Kala-wareejinta Kulaylka waxay leeyihiin mudnaanta xasaasiyad sare, arrin jilicsan, kaydka wejiga aalladda cad-cad ee daabacaadda ugu badan iyo baaritaannada qalad-la'aanta lagu kalsoon yahay.
* Taabasho sare iyo koollo joogto ah waa mid la isku halleyn karo oo wax ku ool ah taas oo aad ugu fiican jawiga codsiyada kala duwan.
Codsiga sumadaha wareejinta kuleylka:
* Aqoonsiga alaabta joogtada ah ee calaamaddu waa wax caadi ah; sumadaha waxay u baahan yihiin inay ahaadaan kuwo amni ah inta ay nooshahay oo dhan.
* Baakaduhu waxay yeelan karaan calaamado ku lifaaqan ama ku dhex jira xirmada. Kuwaani waxay wadan karaan qiimeyn, barcode, aqoonsi UPC, hagitaan adeegsi, cinwaanno, xayeysiin, cuntooyin, iyo wixii la mid ah. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa inay ka caawiyaan iska caabinta ama tilmaamida fara-xumeynta ama baafinta.
* Sumadaha dirista waxay cadeynayaan cinwaanka cinwaanka, soo diraha iyo wixii kale ee macluumaad ah ee faa iidada u leh socodka. Baakado badan oo softiweer ah sida soo saaraha ereyada iyo barnaamijyada maamulaha xiriirka waxay soo saaraan calaamado isku-dheelitiran oo boostada laga soo diro oo laga helo xogta la raacayo oo waafaqsan heerarka boostada. Calaamadahaani sidoo kale waxaa ka mid noqon kara barcode marinnada iyo shuruudaha maareynta gaarka ah si loo dedejiyo keenista.
* Naqshadeynta gaarka ah ee ikhtiyaariga ah: udub dhexaad kala duwan, u dhinta cabirro iwm
* Shaybaar cilmi baaris madaxbanaan iyo horumarin
* Wuxuu buuxiyaa heerka REACH iyo ISO.
Hore: Waraaqda xumbada
Xiga: Boostada boosta